China Wall Mirror စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Donghua
DHUA Acrylic Mirror Wall စတစ်ကာများသည်သင်၏ DIY လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီမှန်နံရံကိုစတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်ခြင်းဟာပလပ်စတစ် acrylic နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးမျက်နှာပြင်မှာရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးနောက်ဖက်မှာကော်ပါ ၀ င်သည်။ သင့်နံရံကိုထိခိုက်မှုမရှိဘဲ paste လုပ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ acrylic နံရံအလှဆင်သည်အဆိပ်အတောက်ကင်းသည်၊ friable မဟုတ်သော၊
•ငွေ၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောသို့မဟုတ်ထုံးစံအရောင်များ
•ဆhe္ဌဂံ၊ ပတ် ၀ န်းကျင်၊ နှလုံးအပြည့်အ ၀ ရရှိနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောသို့မဟုတ်ထုံးစံပုံစံမျိုးစုံ
Mirror Wall Sticker၊ ဖယ်ရှားနိုင်သော Acrylic Mirror Stickers DIY နံရံကပ်အလှဆင် Mirror Non Glass Mirror နေအိမ် Room ည့်ခန်းအိပ်ခန်းအိပ်ခန်းအပြင်အဆင်
Dhua မှန်နံရံစတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်ခြင်းကိုပလပ်စတစ် acrylic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမျက်နှာပြင်သည်ရောင်ပြန်ကာနောက်ဖက်တွင်ကော်များရှိသည်။ မှန်ကိုခြစ်ရာမှကာကွယ်ရန်အကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်ရှိသည်။ ၎င်းကိုချိန်ညှိရန်ကိရိယာများမလိုအပ်ပါ။
ဤ acrylic နံရံအလှဆင်သည်အဆိပ်အတောက်ကင်းသော၊ ပျက်စီးလွယ်ခြင်းမရှိသော၊ ၎င်းသည်အတန်းအစားမှန်ကဲ့သို့ကြည်လင်ပြတ်သား။ ရောင်ပြန်ဟပ်သော်လည်းမပျက်စီးစေဘဲချွန်။ ပျက်စီးလွယ်သည်။
ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်, acrylic
အရောင်: ငွေရောင်၊ ရွှေရောင်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအရောင်များသည်မှန်
အရွယ်အစား - အရွယ်အစားမျိုးစုံသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
ပုံသဏ္:ာန်: ဆx္ဌဂံ, စက်ဝိုင်းစက်ဝိုင်း, နှလုံးeċċ။ ကွဲပြားခြားနားသောသို့မဟုတ်ထုံးစံပုံစံမျိုးစုံ
ပုံစံ - ခေတ်သစ်
အသုံးပြုခြင်း - ဖန်၊ ကြွေထည်၊ ပလပ်စတစ်၊ သတ္တု၊ သစ်နှင့်သစ်မာစသောဆေးများအပါအ ၀ င်သန့်ရှင်းသောမျက်နှာပြင်များ
【ထိပ်တန်းအရည်အသွေးပစ္စည်း】ဖြေ မှန်နံရံစတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်ခြင်းကို acrylic၊ ပေါ့ပါးပြီးတာရှည်ခံခြင်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ မျက်နှာပြင်သည်ရောင်ပြန်နေပြီးနောက်ဖက်တွင်ကော်လည်းရှိသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုနှင့်ထင်ဟပ်ပြသမှုများကိုရရှိရန်အတွက်မျက်နှာပြင်တွင်အကာအကွယ်ပါသောရုပ်ရှင်ရှိသည်။ မဖြည့်မီနံရံဆေးကြောပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ နံရံကပ်သန့်ရှင်းရေးယူပါ။ သင်အသုံးပြုသည့်အခါထုတ်ကုန်ကိုမျက်နှာပြင်ပြားပေါ်တွင်ကပ်ပါ။
【အရွယ်အစား, အရောင်နှင့်ပုံစံ】: Acrylic မှန်ကိုမည်သည့်လိုချင်သောပုံစံဖြင့်မဆိုအလွယ်တကူလုပ်နိုင်သည်၊ အရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည်
【လုပ်ဆောင်ချက်】: အလှဆင်ထားသောမှန်ဒီဇိုင်းကသင့်အိမ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆွဲဆောင်သည်။ ရောင်ပြန်မျက်နှာပြင်အတွက်သင့်အခန်းအားတောက်ပစေနိုင်သည်။ DIY မှပစ္စည်းများသည်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းပေးပြီးသင်၏ကလေးတွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်း၊
【ဖြုတ်တပ်။ ခြစ်ရာ Anti 】: The နံရံမှန်သင်၏အလှဆင်စတစ်ကာများသည်သင်၏နံရံကိုမထိခိုက်စေဘဲပွားများလွယ်ကူစွာဖယ်ရှားနိုင်သည်။ မှန်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်တစ်ခုရှိပြီးမှန်ကိုခြစ်ရာမှကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည်။ သတိပြုရမည့်အချက်မှာအကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူမှန်ကိုမှုန်ဝါးစေသည်
to တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်】: The နံရံမှန်စတစ်ကာများသင်၏နောက်ကျောကော်ဖြင့်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီးသင်၏နံရံကိုမထိခိုက်စေဘဲဖယ်ရှားနိုင်သည်။ တည်ဆောက်ရန်ကိရိယာများမလိုအပ်ပါ။ နောက်ကျောရုပ်ရှင်ကိုချွတ်ကာကြွေပြားများ၊ နံရံများ၊ တံခါးများ၊ ပြတင်းပေါက်များနှင့်ဗီရိုကဲ့သို့သင်ရွေးချယ်ထားသောမျက်နှာပြင်ကိုချောချောမွေ့မွေ့ကပ်ပါ။ ပြီးတော့ရှေ့အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်ကိုချွတ်ပါ။
【လုံခြုံပြီးရေစိုခံ】: DIY နံရံဆေးရောင်ခြည်သည် acrylic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဤပစ္စည်းသည်အဆိပ်မရှိသော၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်မှု၊ မဖေါက်နိုင်၊ ကြေးမုံစတစ်ကာများသည်အတန်းအစားမှန်ကဲ့သို့ကြည်လင်ပြတ်သား။ ရောင်ပြန်ဟပ်သော်လည်းမပျက်စီးစေဘဲချွန်။ ပျက်စီးလွယ်သည်။ မည်သည့်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်မတော်တဆမှုကိုမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိသင့်ကလေးငယ်များနှင့်ကလေးများနှင့်အတူသင်၏မှန်စာရွက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်စဉ်ပျော်စရာကောင်းသောစိတ်ချရသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်။ အဟောင်းကိုမှန်ထက်ပိုမိုလုံခြုံ!
【ကျယ်ပြန့်သောလျှောက်လွှာac: ဤ acrylic ကော်စာရွက်အစုံသည်သင်၏ DIY လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကြေးမုံစတစ်ကာများကိုနံရံများ၊ တံခါးများ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ ဗီရိုအစရှိသည့် smooth ည့်ခန်း၊ ကလေးကစားကွင်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ အားကစားရုံ၊ အိမ်ရုံး၊ စင်္ကြံ၊ နောက်ခံနံရံ၊ အိပ်ခန်းနောက်ခံနံရံနှင့်အခြားတီထွင်ဆန်းသစ်သောနံရံအလှဆင်ပစ္စည်းများသည်နေရာကို ပိုမို၍ ကြည်လင်ပြတ်သားစေရန်ပြုလုပ်ပါ။
1 အဆင့် ၁။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်စတစ်ကာများအသုံးပြုလိုသည့်မျက်နှာပြင်ကိုရှင်းလင်းပါ။
မှတ်ချက်။ ။ နံရံမရှင်းလင်းပါက stckers များသည် ၂၄ နာရီအတွင်းပြုတ်ကျလိမ့်မည်။
2 အဆင့် 2: နောက်ဘက်အကာအကွယ်စက္ကူကိုဖယ်ရှားပြီးလျှင်နံရံသို့မဟုတ်အခြားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်ပါ။
33အဆင့် ၃ - ရှေ့မျက်နှာစာတွင်အကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်ရှိသည်။ အကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်ကို stcikers များမှဖယ်ရှားပြီးမျက်နှာပြင်ကိုညင်ညင်သာသာသန့်ရှင်းပါ။
ဤသည်မှန်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သဖြင့်အစားထိုးမှန်အဖြစ်အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ မျက်နှာပြင်ကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသောအကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုရှိသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမသုံးမီချွတ်ပါ။
Q1: Donghua သည် OEM OEM ထုတ်လုပ်သူလား။
ဖြေ။ ။ Donghua သည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပလတ်စတစ်ကြေးမုံစာရွက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် OEM ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
A: စျေးနှုန်းအတိအကျကိုပြောရန်ဖောက်သည်များသည်ပစ္စည်း၊ အသေးစိတ်၊ အထူ၊ အရွယ်အစား၊ ကော်နှင့်မပါ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အရောင်မည်မျှ၊ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်၊ လိုအပ်သောအရေအတွက်၊ အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္withာန်ဖိုင်များဖြင့်သတင်းပို့နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
Q3 ။ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများမှာအဘယ်နည်း။
A: T / T, Alibaba ကုန်သွယ်မှုအာမခံချက်စသည်တို့ ၃၀% သိုက်၊ တင်ပို့မှုမတိုင်မီ ၇၀% ။ တင်ပို့ခြင်းမပြုမီဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုပေးပို့လိမ့်မည်။
ဖြေ။ ။ EXW၊ FOB၊ CFR၊ CIF၊ DDU၊ DDP ။
A - ပုံမှန်အားဖြင့် ၅-၁၅ ရက်။ သင့်ရဲ့အရေအတွက်အရသိရသည်။
Q6 ။ နမူနာဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ သင့်ရဲ့နမူနာမူဝါဒကဘာလဲ?
A: ပို့ဆောင်ခများနှင့်ပုံမှန်ပုံမှန်နမူနာအချို့ကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။